I-Ultrasonics Yokuvuselelwa Kwebhethri Lithium Ion - Hielscher Ultrasound Technology
Amabhethri e-lithiamu-ion asetshenziselwa izimoto kagesi asanda kufika emakethe enkulu futhi futhi, ukuvuselelwa kwamakhono kufanele kuthuthukiswe.
I-ultrasonic leaching iyindlela ephumelelayo, yemvelo-friendly ukuze kutholakale izinsimbi ezifana neLi, Mg, Co, Ni njll ekusetshenziseni amabhethri e-Li-ion.
Izinhlelo ze-ultrasonic zezimboni ze-Hielscher zezinhlelo zokusebenza ze-leaching zinokwethenjelwa futhi ziqinile futhi zingahlanganiswa kalula kwizitshalo ezikhona zokuvuselela.
Ukusebenzisa kabusha amabhethri e-Lithium-ion
Amabhethri e-lithiamu-ion asetshenziswa kabanzi ezimotweni zikagesi (EV), ama-laptops namafoni. Lokhu kusho ukuthi ukuchitha amabhethri e-lithium-ion kuyinkinga yamanje mayelana nokuphathwa kwemfucuza nokuvuselelwa kabusha. Amabhethri angumshayeli omkhulu wezindleko ze-EVs, futhi ukulahlwa kwabo kuyabiza, futhi. Izici zemvelo nezomnotho zithinta ukuvala okuvaliwe okuvaliwe kusukela lapho imfucuza yebhethri iqukethe izinto eziwusizo futhi kusiza ukunciphisa ikhanda lika-carbon lokukhiqiza amabhethri e-Lithium-ion.
Ukusetshenziselwa kabusha kwamabhethri e-Li-ion kukhula emkhakheni wezezimboni ezikhulayo ukuze kutholakale ukutholakala kwesikhathi eside esizayo sezinsimbi zensimbi ezingavamile kanye nezinye izingxenye zebhethri nokunciphisa izindleko zemvelo yezimayini.
I-Industrial Ultrasonic Leaching
I-ultrasonic leaching nesimbi yensimbi ingasetshenziswa ekuvuseleleni izinqubo ze-lithium cobalt oxide amabhethri (isb. Kusuka kuma-laptops, ama-smartphone, njll) kanye nezinsimbi zamatribhethi e-lithium-nickel-manganese-cobalt (isb.
I-high-power ultrasound iyaziwa ngokukwazi kwayo ukucubungula amakhemikhali amakhemikhali nama-slurries ukuze kuthuthukiswe ukudluliswa kwamandla futhi kuqale ukuphendula kwamakhemikhali.
Imiphumela ephawulekayo yamandla ultrasonication kusekelwe esimweni cavitation acoustic. Ngokuhlanganisa i-high-power ultrasound ibe yiziphuzo / izilonda, ukushintshwa kwe-low-pressure kanye nama-high-pressure amagesi ezitsheni ezikhiqiza ama-bubbles amancane. I-vacuum encane iyakhula ikhule phezu kwemijikelezo ephansi ephansi-yomshoshaphansi / ephakeme ukucindezela kuze kube yilapho implode ihlukumezeka. Ukuqhuma kwamabhulebhu okuvutha kungacatshangwa njengama-microreactors lapho amazinga okushisa angafika ku-5000K, izingcindezi ezifika ku-1000atm, nokushisa nokushisa okungaphezulu kuka-10-10 kwenzeka. Ngaphezu kwalokho, amabutho anamandla we-shear hydrodynamic kanye namajetshi amanzi angama-280m / s velocity akhiqizwa. Lezi zimo ezimbi kakhulu ze-cavitation ye-acoustic zidala izimo ezingavamile ngokomzimba nakumakhemikhali kwezinye iziphuzo ezibandayo futhi zidale indawo enenzuzo yokuphendula kwamakhemikhali (Sonochemistry).
48kW iprosesa ye-ultrasonic
ngenxa yezinhlelo zokusebenza ezidingayo ezifana neaching lezinsimbi
I-leaching ye-ultrasonic yezinsimbi kusuka kumfucuza webhethri okhathele.
I-cavitation ye-ultrasonically ingenza ukuba i-thermolysis ye-solutes kanye nokwakhiwa kwama-radicals asebenze kakhulu nama-reagents, njenge-radicals yamahhala, ama-hydroxide ions (• OH,) i-hydronium (H3O +) njll, ehlinzeka ngezimo ezingavamile zokusebenza okwenziwe oketshezi ukuze inani lokuphendula likhule kakhulu. Ama-solids afana nezinhlayiya asheshe aqhutshwe yi-jets ashicilelwe futhi aphikisana nokushayisana okuhlukile kanye nokwehliswa kwemvelo okwandisa indawo esebenzayo futhi ngaleyo ndlela ukudluliselwa kwamandla.
Inzuzo enkulu ye-leaching ye-ultrasonic nokubuyiswa kwensimbi ukulawula okuqondile phezu kwemigomo yemigomo efana ne-amplitude, ingcindezi nokushisa. Lezi zimingcele zivumela ukulungisa izimo zokuphendula ngokuqondile nendawo yokucubungula kanye nomkhiqizo ohlosiwe. Ngaphezu kwalokho, i-leaching ye-ultrasonic isusa ngisho nezinhlayiya zensimbi encane kunazo zonke ezivela e-substrate, kuyilapho kugcinwa izinto ezincane. Ukuvuselelwa kwensimbi okuthuthukisiwe kubangelwa ukudalulwa kwe-ultrasonic yezindawo ezibonakalayo eziphezulu, ukukhula kwamazinga okuphendula, nokuthuthukiswa kwezinto eziningi. Izinqubo ze-Sonication zingenziwa ngcono ngokuthonya ipharamitha ngayinye ngakho-ke azisebenzi nje kuphela kodwa futhi zisebenza kahle kakhulu.
Ukulawula kwepharamitha langempela kanye nokusebenza kahle kwamandla kwenza i-leaching ye-ultrasonic indlela enhle futhi ehle kakhulu – ikakhulukazi uma kuqhathaniswa nezinqubo eziyinkimbinkimbi ze-acid leaching kanye ne-chelation.
Ukubuyiswa kwe-ultrasonic kwe-LiCoO2 kusuka amabhethri athile we-Lithium-Ion
I-Ultrasonication isiza leaching yokunciphisa kanye nokwelashwa kwamakhemikhali, okusetshenziselwa ukululama uLi njengoLi2I-CO3 futhi Co njengo Co (OH)2 kusuka ebhethri i-lithium-ion amabhethri.
Zhang et al. (2014) kubika ukutholakala okuphumelelayo kwe-LiCoO2 besebenzisa i-reactor ultrasonic. Ukuze ulungise isixazululo sokuqala esingu-600mL, bafake i-10g ye-LiCoO engavumelekile2 i-powder ku-beaker futhi wanezela i-2.0mol / L yesisombululo se-LiOH, ehlanganisiwe.
Le nhlanganisela yathululelwa ku-irradiation ye-ultrasonic futhi idivayisi evuselelayo yaqala, idivayisi eshukumisayo ibekwa ngaphakathi kwe-container yokusabela. Kwashiswa ku-120◦C, bese kuthi idivayisi ultrasonic ihlelwe ku-800W futhi imodi yesenzo se-ultrasonic isethelwe kumjikelezo womsebenzi wokuxoshwa we-5 sec. ON / 2sec. OFF. I-irradiation ye-ultrasonic isetshenziswe ngo-6h, bese ingxube yokusabela ihlile ekamelweni lokushisa. Ama-residu aqinile ahlanzwa izikhathi eziningana ngamanzi ahlanzekile futhi omisiwe ngo-80◦C kuze kube isisindo sonke. Isampula esitholiwe iqoqwe ukuhlolwa okulandelayo nokukhiqizwa kwebhethri. Umthamo wokukhokha emjikelezweni wokuqala ngu 134.2mAh / g kanye nomthamo wokukhishwa yi-133.5mAh / g. Inkokhelo yokuqala kanye nokukhipha ukusebenza kahle kwakungu-99.5%. Ngemuva kwemijikelezo engu-40, ukukhishwa kwamandla kusekhona ngo-132.9mAh / g. (Zhang et al. 2014)
Amakristali ase-LiCoO2 asetshenziswa ngaphambi (a) nangemva (b) ukwelashwa kwe-ultrasound ku-120◦C ngo-6h. umthombo: Zhang et al. 2014
I-leaching ye-ultrasonic nge-acids efana ne-citric acid ayikona kuphela kuphela kodwa futhi inemvelo. Ucwaningo luthole ukuthi i-leaching of Co neLi iphumelela kakhulu nge-citric acid kunama-acids angenayo i-H2SO4 ne-HCl. I-Co% engaphezulu kwezingu-96% ne-100% i-Li yabuyiselwa ekusetshenzisweni kwamabhethri e-lithium-ion. Iqiniso lokuthi ama-acids e-acric njenge-citric acid ne-acetic acid ayithengi futhi angasetshenziselwa izinto eziphilayo, anikezela ekuthuthukiseni izinzuzo zezomnotho nezemvelo zokunikwa indodana.
I-High-Power Industrial Industrial Ultrasonics
I-Hielscher Ultrasonics ingumhlinzeki wakho onolwazi olunezinkampani ezinomsoco onamandla kakhulu futhi onokwethenjelwa, oletha amandla adingekayo ukuze aqoqe izinsimbi ezivela ezintweni zokudoba. Ukuze kusetshenziswe amabhethri e-li-ion wokuhlenga kabusha ngokukhipha izinsimbi ezifana ne-cobalt, i-lithium, i-nickel, ne-manganese, amasistimu anamandla futhi aqinile ase-ultrasonic ayadingeka. Hielscher Ultrasonics’ izingxenye zezimboni ezifana ne I-UIP4000hdT (4kW), I-UIP10000 (10kW) futhi UIP16000 (16kW) yizinhlelo ezinamandla kunazo zonke futhi ezinamandla kakhulu zokusebenza nge-ultrasound emakethe. Zonke izingxenye zethu zezimboni zingasetshenziswa ngokuqhubekayo nge-amplitudes ephezulu kakhulu kufika ku-200μm ku-24/7 ukusebenza. Nge-amplitudes ephakeme nakakhulu, i-sonotrode e-ultrasonic eyenziwe ngezifiso iyatholakala. Ukuqina kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuvumela ukusebenza komsebenzi we-24/7 emsebenzini obuthakathaka nasezindaweni ezinzima. I-Hielscher inikeza ama-sonotrode akhethekile nama-reactors ngamazinga aphezulu okushisa, izingcindezi kanye neziphuzo ezishisayo, futhi. Lokhu kwenza ama-ultrasonicators ethu asezimboni afaneleke kakhulu kumasu okusebenza ngamatshe, isib. Ukwelashwa kwe-hydrometallurgical.
I-Golmohammadzadeh R., uRashchi F., Vahidi E. (2017): Ukubuyiselwa kwe-lithium ne-cobalt ekusetshenzisweni kwamabhethri e-lithium-ion esebenzisa ama-acids e-organic: Ukucubungula izinqubo kanye nezici ze-kinetic. Ukulawulwa kwezinkunkuma 64, 2017. 244-254.
I-Shin S.-M.; Lee D.-W .; Wang J.-P. (2018): Ukukhiqizwa kwe-Nickel Nanosizedised Powder kusuka ku-LiNiO2 kusuka Ibhethri Ye-Lithium-Ion Ekhethekile. Amamitha 8, 2018.
UZhang Z., He W., Li G., Xia J., Hu H., Huang J. (2014): Ukulungiswa kwe-Ultrasound-Hydrothermal Ukulungiswa kwe-LiCoO2 kusuka amabhethri e-Lithium i-Cathode ye-Spent Spent. Int. J. Electrochem. Sci., 9 (2014). 3691-3700.
Zhang Z., He W., Li G., Xia J., Hu H., Huang J., Shengbo Z. (2014): Ukubuyiswa kweLithium Cobalt I-Oxide Material kusukela ku-Cathode of Spent Lithium-Ion amabhethri. ECS Electrochemistry Izincwadi, 3 (6), 2014. A58-A61.
I-lithium-ion amabhethri (LIB) yiyona ngqoqo yokuqoqwa (amabhethri) anikezela amandla aphezulu futhi ahlanganiswa njalo kumaklayenti kagesi abasebenzisi njengamagetsi e-electronic, izimoto ezingavamile, i-laptops, amafoni, ama-iPod, njll. ezinye izinhlobo zamabhethri avuselelekayo anesayizi kanye nomthamo ofanayo, i-LIBs ilula kakhulu.
Ngokungafani nebhethri eyinhloko ye-lithium, i-LIB isebenzisa i-lithium compound esikhundleni se-lithium metallic njenge-electrode yayo. Izingxenye ezinkulu zebhethri i-lithium-ion yi-electrodes yayo – i-anode ne-cathode – kanye ne-electrolyte.
Amangqamuzana amaningi ahlanganyela izingxenye ezivamile ngokwe-electrolyte, separator, foil kanye ne-casing. Umehluko omkhulu phakathi kobuchwephesha beselula yizinto ezisetshenziswayo njenge “izinto ezisebenzayo” njenge-cathode ne-anode. I-graphite yizinto ezivame ukusetshenziswa kakhulu njenge-anode, kanti i-cathode yenziwe nge-layered LiMO2 (M = Mn, Co, no-Ni), i-spinel LiMn2O4, noma i-olivine LiFePO4. I-electrolyte liquid electrolyte (isib., I-LiPF6 usawoti ehlakazwa ngenhlanganisela yezixazululo eziphilayo, njenge-ethylene carbonate (EC), i-dimethyl carbonate (DMC), i-diethyl carbonate (i-DEC), i-ethyl methyl carbonate (EMC), njll) ivumela ukunyakaza kwe-ionic.
Kuncike ezintweni eziphathekayo ezinhle (i-cathode) ne-negative (anode) ye-electrode, amandla we-energy kanye ne-voltage ye-LIBs ngokuhlukahluka.
Uma isetshenziselwa izimoto zikagesi, ngokuvamile ibhetri yemoto kagesi (EVB) noma ibhetri ye-traction isetshenziswa. Amabhethri amathrekhi anjalo asetshenziselwa imishini yokushayela, amathrekhi kagesi kagesi, ama-scrubbers ephansi, izithuthuthu zikagesi, izimoto zikagesi, amaloli, imoto kanye nezinye izimoto kagesi.
I-Metal Recycling kusuka kuma-Battery Li-I-Ion Spent
Uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo zamabhethri ezivame ukuqukethe i-lead noma cadmium, amabhethri e-Li-ion anezinsimbi ezinobuthi ezincane futhi ngakho-ke kubhekwa njengemvelo-friendly. Kodwa-ke, inani elikhulu lokusebenzisa amabhethri e-Li-ion, okuzodingeka ukuthi alahlwe njengama-batriji avela ezimotweni zikagesi, enikeze inkinga yokudoba. Ngakho-ke, i-loop yokuvala kabusha evaliwe ye-Li-ion amabhethri iyadingeka. Kusukela kumbono wokonga, izakhi zensimbi ezifana ne-iron, ithusi, i-nickel, i-cobalt, ne-lithium zingatholakala futhi zisebenzise kabusha ekukhiqizeni amabhethri amasha. Ukubuyisela kabusha kungavimbela nokuntuleka okuzayo, futhi.
Nakuba amabhethri ane-nickel loadings ephakeme efika emakethe, akunakwenzeka ukukhiqiza amabhethri ngaphandle kwe-cobalt. Okuqukethwe okuphezulu kwe-nickel kuza ngezindleko: Ngokuqukethwe kwe-nickel okwandisiwe, ukuzinza kwebhethri kunciphile futhi ngaleyo ndlela ukuphila komjikelezo wayo kanye nekhono lokushaja okusheshayo kuncishisiwe.
Ukukhula okudingekayo kwamabhethri e-Li-ion kucela ukwandisa amandla okuvuselela amabhethri emfucuza.
Amabhethri wezimoto kagesi ezifana ne-Tesla Roadster ineminyaka engaba ngu-10 yokuphila.
Ukusetshenziselwa kabusha kwamabhethri e-Li-ion okhathele kuyinkinga efuna ukusukela lapho kutholakala amakhemikhali aphezulu kanye namakhemikhali anobungozi, ehambisana nezingozi zokushisa okufudumele, ukwethuka kagesi nokukhishwa kwemithi enobungozi.
Ukuze kutholakale ukuvuselelwa kabusha kwe-loop, zonke izibopho zamakhemikhali nazo zonke izakhi kufanele zihlukaniswe ezingxenyeni zabo. Kodwa-ke, amandla adingekayo okuvuselelwa kabusha okuvaliwe okuvaliwe ayabiza kakhulu. Izinto ezibaluleke kakhulu zokulondoloza ziyizinsimbi ezinjengeNi, Co, Cu, Li, njll njengoba izimayini ezibiza kakhulu namanani aphezulu emakethe ezakhiwe zensimbi kwenza ukuvuselelwa kwezomnotho kube mnandi.
Inqubo yokuvuselela kabusha ye-Li-ion amabhethri iqala ngokuqedwa nokukhishwa kwamabhethri. Ngaphambi kokuvula ibhethri, kudinga ukungahambi ukuvimbela amakhemikhali ebhetri. Ukunyuka kungatholakala ngogesi owenziwe nge-cryogenic noma e-control oxidation. Kuye ngesayizi yebhethri, amabhethri angaqedwa futhi ahlakazwe esitokisini. Emva kokuqothula nokuchoboza, izingxenye zihlukaniswe ngezindlela ezimbalwa (isib. Ukuhlolwa, ukusikeka, ukukhipha ngesandla, ukuhlukanisa ngesandla, ukuhlukanisa ngesandla) ukuze ususe isisindo, i-aluminium, ithusi kanye nama-plastiki avela ku-electrode powder. Ukuhlukaniswa kwezinto zokwakhiwa kwe-electrode kuyadingeka emisebenzini engezansi, isib. Ukwelashwa kwe-hydrometallurgical.
Ukuze kusetshenziswe i-pyrolytic, amabhethri aqoshiwe abhekwa esithandweni somlilo lapho kutholakala khona umcibisholo njenge-agent-forming agent.
Ukucubungula kwe-hydrometallurgical kusekelwe ekusebenzeni kwe-asidi ukuze kuncishiswe ama-salti njengensimbi. Izinqubo ezijwayelekile ze-hydrometallurgical zihlanganisa i-leaching, imvula, i-exchange exchange, i-solvent extraction kanye ne-electrolysis yezixazululo ezinamanzi.
Inzuzo yokucubungula kwe-hydrothermal yi-yield ephezulu yokubuyisela kwe-+ 95% ye-Ni ne-Co njengama-salts, + angu-90% we-Li angakhanjiswa, futhi konke okunye kungatholakala kuze kufike ku- + 80%.
I-cobalt ngokukhethekile iyisici esibucayi kwi-lithium ion cathodes yebhethri yezinhlelo zokusebenza eziphezulu zamandla namandla.
Izimoto ze-hybrid zamanje ezifana neToyota Prius, zisebenzisa amabhethri e-nickel metal hydride, adilizwa, alayishwa futhi avuselelwa ngendlela efanayo njengebhethri ye-Li-ion.